Layaabka Dunida: Nin Ku Guulaystay In Ka Badan 145 Shahaado Jaamacadeed Oo Uu Ku Hantay Muddo Ku Siman 30 Sannadood | FooreNews
Home Barnaamijo Layaabka Dunida: Nin Ku Guulaystay In Ka Badan 145 Shahaado Jaamacadeed Oo Uu Ku Hantay Muddo Ku Siman 30 Sannadood
FoorenewsSep 23, 2017Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
Professor VN Parthiban, oo wax ka dhiga jaamacad ku taalla magaalada Chennai ee dalka Hindiya wuxuu qaatay in ka badan 145 degree jaamacadeed oo uu ku urursaday mudadii 30-ka sano ahayd ee lasoo dhaafay. Mana laha qorshe uu ku joojiyo wax-barashada waqtiga nolosha uga dhiman isagoo doonaya in uu sii qaato shahaadooyin kale oo jaamacadeed.
Safarka dheer ee tacliintiisu wuxuu ku bilowday halgan adag. Wuxuu ahaa mid aan ku wanaagsanayn dhugashada habboon ee wax-barashada, wuxuuna ku dhacay imtixaanno iyo mashruucyo badan. Markii uu ugu danbeyn qalin-badashay, Parthiban wuxuu shaqo ka helay Waaxda Garsoorka, hayeeshe doonistiisa la xidhiidha wax-barashada marna ma aanay gaagixin.
La dhacsanaanta mooddooyinka qaar ee jaamacadda loogu dhigay iyo laamaha kale oo uu heli karayay, Parthiban wuxuu go’aansaday inuu ku laabto Jaamacadda kana qaato degree-ga labaad. Kadibna mid saddexaad. Deedna 142 shahaado oo dheeri ah.
Sida uu ku sharraxay waraysi ay la yeelatay Jariidadda Sunday Indian, kadib markii uu helay shahaadada degree-ga koobaad, wuxuu bilaabay inuu codsado jaamacad walba oo aan uga baahnayn warqad beddel si uu isku diiwaan-geliyo. “Markaas waxaan hal waqti wada baranayay maaddooyin kala duwan. 30-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaan joogto ugu jiray diyaarinta imtixaanaadka iyo codsashada degree ama koorasyo cusub,” ayuu yidhi ninkan layaabka lihi.
Qisooyinka ku lammaan Parthiban guulihiisa waxaa kamid ah, 3 Master oo ah cilmiga Science degrees, 8 Master oo ah sharciga Law degrees, 8 Master oo ganacsiga ah, 9 Master of Business Administration ah , 10 Master oo Arts degrees ah iyo 12 degree-yo cilmi-baadhisyo la xidhiidha. Mar la weydiiyay haddii ay jirto maaddo aanu ku raaxaysan barashadeeda, Parthiban wuxuu ku jawaabay ‘Xisaabta.’
Nasiib-darro, wuxuu isku arkay dhinac taban oo kaga timid waxbarashadiisa joogtada ah. Xifdintiisa badani waxay ku keentay in maskaxdiisu aanay helin firaaqo ay ku qabato xusuusihii hore. Waxaana ku adag inuu aqoonsado wajiyada dadkii uu yiqiin iyo meelihii uu waqtiyo badan ku sugnaa.
Balse caqabadahani uma muuqdaan kuwo hoos u dhigi kara hankiisa. 56-jirkani wali wax-barasho wuxuu wali ku jiraa safarkiisa. Wuxuuna casharro ka bixiyaa jaamacado badan. Waxaa intaas usii dheer inuu leeyahay qoys, xaas iyo laba carruur ah kuwaas oo dhammaantood si dhab ah tacliinta ugu go’ay iyaguna oo aad u jecel in ay waxbartaan. Arrinka layaabka lihi waxa uu yahay xataa xaaskiisu waxa ay u hamuun qabtaa in ay shahaadooyin badan oo Jaamacadeed ku guulaysato waxaanay wakhtigan haysataa 9 degree jaamacadeed waxaanay doonaysaa in ubadkeedu sidoo kale ay shahaadooyin badan qaataan.
Previous PostBuuggii Ay Qortay Hillary Clinton Oo Suuq Ballaadhan Dunida Ka Helaya Noqdayna Buuggii Loogu Iibsasho Badnaa Dunida In Muddo Ah! Next PostBARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ - Taxane Aad Kaga Bogan Doonto Dhammaanba Barnaamij Siyaasadeedka KULMIYE ..Q: 3aad